PA007 - Mgbapụta Shrill Mkpuchi Mgbu Onyinye maka Okike, Jogger, Womenmụ nwanyị, ụmụaka, okenye - $ 45 | Ngwọta OMG
PA007 - Mgbapụta Shrill Mkpuchi Mgbu Onyinye OMG maka Mpụ, Jogger, Womenmụ nwanyị, ụmụaka, okenye - $ 45
AJỤTA NA-AKA: N'ọnọdụ mberede, wepụ ntụtụ ígwè ahụ, Nchekwa onwe onye ga-ekwupụta ozugbo ihe ịdọ aka ná ntị nke decibels 120 iji hụ ndị gbara ya gburugburu. The siren ga-ada ụda maka 30 nkeji ma ọ bụrụ na e weghachi pin na ngwaọrụ.
EKWUGHỊ EZIOKWU: Ụdị igodo dị ala agaghị eme ka onye na-achọ ịma ihe ọ bụla ma ọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ na-elekwasị anya na akpaaka gị, belt ma ọ bụ akpa akwụkwọ maka adaba, ngwa ngwa, na ọkụ ọkụ ọkụ, na-adaba maka ọnọdụ mberede ala mberede, nke bara uru karị.
AJỤ AKA: Ụda olu mkpu ụda nwere ike ime ka nchegharị na gburugburu, site na ịdọ aka ná ntị na-aga n'ihu, iji dọta ndị na-agafe agafe-site n'ịchọ isi iyi iji nyere aka, decibels onwe onye maka 120dB, nwere ike igbasa 330 ụkwụ (100M).
ANYỊ NA-EKWU NDỊ KWURU: Ndị na-eto eto, ụmụ akwụkwọ kọleji, ikwiikwii abalị, ndị ọrụ owuwu, ndị agadi, ndị na-arụ ọrụ, ndị nọọsụ / ndị nlekọta na-elekọta onwe ha, nnyefe / ụzọ ndị ọrụ na-agbachitere onwe ha.
Ngwaahịa Ụdị: Akwado batrị alcine 3 na-akwado ya LR44, Ejila ya ugboro ugboro ma ọ bụrụ na ndị na-enweghị mberede, ka ngwaahịa ahụ ghara ịrụ ọrụ n'ọnọdụ mberede. Jiri nlezianya nyochaa ngwaahịa ahụ ma dochie batrị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Wepu ihe nkedo iji mepee akpu n'azụ iji dochie batrị ahụ, enwere ike ịzụta batrị ahụ na ụlọ ahịa iji dochie ya.
* Mgbasa ozi onwe onye - 120dB ibu mgbochi mgbochi, mgbochi ndina n'ike, nwanyi / agadi jogger / nwa / nwa akwụkwọ mgbochi ọgụ, ozugbo arụ ọrụ site na ịmịpụ agịga.
* Igodo isi mkpuchi - keychain key a bụ ihe zuru okè na akpa aka gị, belt ma ọ bụ akpa, dị mfe, nkwụsị ozugbo, ka obere ihe ejiji anaghị eme ka onye na-eti mkpu ma ọ bụ onye omempụ ghara iche.
* Wuru-na ikanam ọkụ - wuru-ke ikanam ọkụ, na ukwuu uru maka ala ìhè mberede gburugburu ebe obibi.
* N'ihi ụda kọmpat, arụ ọrụ dị elu na akwa mma imewe, ngwá ọrụ nchebe onwe onye na-egbochi onwe gị na-enye gị ohere dị iche iche maka ngwa ngwa nke onwe gị.
Uru nke mkpu onwe anyị:
Mgbasa ozi onwe onye obere bụ ụzọ dị mma iji chebe onwe gị pụọ na nsogbu ahụ. Ụfọdụ n'ime uru nke nhọrọ a gụnyere:
+ Ngwá ọrụ enyi na enyi maka afọ niile.
+ Ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ maka ọnọdụ mberede ọkụ.
+ Ụdị ọrụ a dị obere agaghị eme ka onye ahụ na-awakpo ya ma ọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ ghara ile ya anya.
+ Ọ bụrụ na ị nọ n'ihe ize ndụ, ị nwere ike icheta ndị ọzọ na usoro ahụ, ọ dị na 330 ụkwụ (100M).
Ọ bụkwa ezinụlọ, ndị enyi, onyinye zuru oke nke onye hụrụ n'anya.
1 x mgbasa ozi onwe onye
2.6 x 1.6 x 0.9 sentimita
Nzuzo 2381 28 Echiche Taa